Mogadishu Journal » FIFA ayaa $ 201million oo magdhaw ah siisay Waaxda Caddaaladda ee Mareykanka
FIFA ayaa lagu abaalmariyay $ 201million oo magdhow ah falal dambiyeedyada mas’uuliyiintii hore.
Sannadkii 2015 -kii, guddiga kubbadda cagta adduunka waxaa soo weeraray mas'uuliyiinta Switzerland iyaga oo wakiil ka ah Waaxda Caddaaladda Mareykanka, iyadoo Sepp Blatter uu ka mid ahaa in ka badan 40 sarkaal.
Talaadadii, FIFA waxay xaqiijisay in Waaxda Caddaaladda ay bixisay xirmo magdhow ah oo dhan $ 201m oo ay siisay FIFA Foundation.
Lacagtan - oo laga soo qaatay akoonnada bangiga ee saraakiisha la dacweeyay - ayaa daboolaysa khasaarihii soo gaaray FIFA, CONCACAF iyo CONMEBOL oo ahaa "dhibbanayaashii tobanaan sano ee musuqmaasuqa kubadda cagta".
FIFA ayaa xaqiijisay in lacagtaasi ay geli doonto Sanduuqa Cafiska Kubadda Cagta Adduunka oo dhawaan la sameeyay, oo loo aasaasay inuu ka caawiyo maalgelinta mashaariicda la xiriira kubadda cagta.
“Waan ku faraxsanahay inaan arko in lacagtii sida sharci -darrada ah looga saaray kubbadda cagta ay hadda soo noqonayso si loogu isticmaalo ujeeddooyinkeeda habboon, maadaama ay ahayd inay markii hore ahaan jirtay,” ayuu yiri Madaxweynaha FIFA Gianni Infantino.
"Waxaan rabaa inaan si kal iyo laab ah ugu mahadceliyo mas'uuliyiinta Caddaaladda Mareykanka dadaalkooda ku aaddan arrintan, sida degdegga ah oo wax ku oolka leh ee ay arrimahan u soo gabagabeeyeen, iyo weliba kalsoonidooda guud ahaan. 2015, waxaan awoodnay inaan si aasaasi ah FIFA uga beddelno urur sumeysan xilligaas, oo aan u beddelno maamule isboorti oo caalami ah oo aad loo qadariyo oo lagu kalsoon yahay.
“Mahadsanid, waxaan si wanaagsan uga gudubnay xilligaas nasiib darrada ah ee taariikhda hadda waana wax aad u wanaagsan in la arko maaliyad weyn oo la gelinayo gacanta FIFA Foundation, taas oo si togan u saamayn karta dad badan oo adduunka kubbadda cagta ah, gaar ahaan barnaamijyada dhallinyarada iyo bulshada.”
Qoraal gooni ah, xiriirka Koonfurta Ameerika CONMEBOL wuxuu xaqiijiyay inuu heli doono $ 71m oo xirmada ah.
CONMEBOL waxay sheegtay inay u adeegsan doonto lacagahaas xeryaha dhallinyarada, waxbarashada, garsoorayaasha iyo koorsooyinka tababarka, wacyigelinta bulshada iyo kubbadda cagta haweenka.